Iileta zombala: usuku lokuzalwa, intle, abantwana kunye nezinye ezininzi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Las Ileta yokufaka imibala ifashoni kwaye zisesinye sezixhobo abazali abanazo, kwaye abo bangekhoyo, ukufundisa abantwana babo, kunye nabo bangenayo, ukufaka umbala, nokuba kwiipilisi zabo okanye kwiphepha elishicilelweyo xa siye ephepheni loo leta ivela kwiiparele.
Namhlanje siza kukufundisa iindidi ezahlukeneyo zeeleta ukuya kumbala, njani Yiba enye kunye neeleta ezilungileyo Ukuze usondele kweli hlabathi lincinci, apho wonwabela kakhulu ngesixa esikhulu somxholo esinayo kwiwebhu simahla. Ziphose kuyo.
1 Ileta kufuneka ibe njani kumbala
2 Iindidi zoonobumba ukuya kumbala
2.2 Umbhalo ophezulu
2.4 Ndikunqwenelela usuku lokuzalwa
2.5 Umbala kunye nokusika
3 Oonobumba abagqwesileyo kumbala
3.2 Umbhalo ophezulu
3.3 Abazali beGeeky
3.4 Imizobo emincinci
3.5 Iileta zebhola
3.6 Iileta zezilwanyana
3.7 Iileta zezilwanyana ezingakumbi
3.8 Uvuyo lokubhala iileta
3.9 Oonobumba abahle ngokufakelwa imibala
3.10 Iileta ezinomdla wokuprinta
Ileta kufuneka ibe njani kumbala
Ngokwesiqhelo iileta eziza kufakwa imibala, nokuba kungasiphi na isizathu, kufuneka zibenazo izikhewu zakho ukuzizalisa ngombala. Nawuphi na umzobo okwiphepha eliprintiweyo okanye kwithebhulethi okanye kwiscreen sekhompyuter, kufuneka uzotywe ngomgca omnyama olungileyo ukuze uchongwe ngokucacileyo ukuba sijongane nekati, isakhiwo okanye ilifu nje.
Kubalulekile ngesizathu sokusebenzisa imibala elungileyo. Ewe Unyana wethu akachazi kakuhle ukuba sijamelene nelangaMhlawumbi ungacinga ukuba ngulo mngxunya usenokuba useludongeni. Kwaye inokwenzeka ngezinto ezahlukeneyo zeetemplate esiza kuzifaka imibala.
Kubalulekile ukuba kuba bengoonobumba abafakelwe imibala, bachazwe ngokwaneleyo ukuze baqondwe ngokugqibeleleyo kwaye izinto zokuhombisa zikwindawo yokusebenzisa umbala omnye okanye omnye. Ke sinokudlala ngothotho lweeleta ezichonga indlulamthi enemvubu 'j' okanye 'h'. Ukucaca kubaluleke kakhulu ukukhetha ileta esiza kuyifaka imibala kamva.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zoonobumba ngezizathu ezahlukeneyo okanye iinjongo. Sinezona zabantwana ikakhulu, kuba ziyindlela efanelekileyo yokukhuthaza omncinci endlwini ukuba athathe iipensile ezinemibala ngesandla kwaye aqale ukufumanisa umhlaba wombala ngezi leta zemibala. Kancinci siya kukwazi ukukuvuyisa ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa ubuchwephesha obutsha obufana neefowuni eziphathwayo okanye izikrini zethebhulethi.
Ngale nto sithi zinokusetyenziswa, kodwa Kuya kusoloko kukhethwa ukuba baziqhelanise namaphepha aprintiweyo apho ungabhala khona, wenze iimpazamo kwaye ufunde.
Iindidi zoonobumba ukuya kumbala
Kukho iintlobo ezingapheliyo zeeleta ukuya kumbala. Si kwelinye icala abantwana kunye nabalinganiswa abaphambili Kule meko, kodwa sikwanabo oonobumba abakhulu, oonobumba abancinci, ukufaka umbala kunye nokusika kwaye abo bayavuyisana nomhla wokuzalwa. Ukuba sinobuchule sinokufumana iileta ezithile ezisifanele ngezizathu ezahlukeneyo. Omnye ukufundwa komncinci wendlu kunye nomnye ukuba le mfundo inye isebenza njengesipho kumalume okanye utata kutyelelo lokuzalwa kwakhe olulandelayo.
Iileta zabantwana, ngaphandle kwe tsalwa ngokucacileyo kwaye ezibolekayo ekuchongeni ngokukhawuleza, zihlala zikhatshwa sisilwanyana. Sinamatyala endlovu ane "E", ikati ene "G" okanye ihashe ngo "C". Emva koko siza kukubonisa umxholo onokuwukhuphela ukuze ube nereferensi elungileyo yoonobumba abafake imibala kumbala womntwana.
Ukuchaneka ngakumbi kwaye ngaphandle kwee-curve ezininzi, zininzi iintlobo zoonobumba abakhulu. Ngokuqhelekileyo khonza zombini kubantu abadala abantwana bona. Singazifumana zihonjisiwe kunye nazo zonke iintlobo zeefonti. Ukuba siya kwiifonti ezigobileyo ngakumbi, injongo yokulinganisa amanye ama-albhamu eBeatles okanye ii-60s kunokuba kufanelekile.
Oonobumba abahle bahlala bekhona yonke iminyaka kwaye inyani kukuba sinazo phofu. Ukufaka imibala koonobumba abalishumi elinambini kunokuza ngokukhawuleza engqondweni kwaye kunokusikhumbuza INkosi yeeRingi. Kananjalo ezinye izinto zale mihla kunye neempawu ezahlukileyo zokufumana ezona zakudala.
Iya kuxhomekeka kwisitayile ngaphakathi kwezo zintle, kodwa ngazo zonke ezo ncwadi kufuneka sizifakele imibala ube neeyure ezimbalwa cwaka umbala.
Iileta ezinombala wokuvuyisana nomhla wokuzalwa awudingi ileta yokugubungela. Ngesizathu sokubhiyozela, sinokufumana iindidi ezintle kuzo zombini ezona zincinci endlwini kunye nakweyona indala. Amakhandlela, iibhaluni kunye neemeko zepati zihlala zizinto ezihamba nohlobo oluvulekileyo nolunobuhlobo.
Sele singazifumana ezonaqobo zokuqala zinje ngezi zibonisiwe apho unobumba ngamnye ufana nebhaluni ekhukhumeleyo kwaye kungakuhle kakhulu ukuvuyisana nomhla wokuzalwa.
Umbala kunye nokusika
Olu hlobo loonobumba luphawulwa ngalo mgca usikiweyo ufuna ukuba sisebenzise izikere zethu kwaye sinokubasika. Singazikhangela ezo zinqumle istena okanye ezo sizinqumlayo ngesikere ukusika imilo yejiyometri.
Oonobumba abagqwesileyo kumbala
Ezi khathuni zisibeka phambi kuthotho lweeleta zabantwana sikhatshwa zezi zilwanyana zihlekisayo. Yenye yezona zinto zibalaseleyo kolu luhlu kwaye yenye yezona zinto zibalulekileyo. Ngasentla bayakuvumela ukuba usebenzise usetyenziso lwakho lwewebhu ukuzoba kwiphepha lakho emva koko ukhuphele ngokuthe ngqo okanye uprinte oonobumba abanemibala.
Kule webhusayithi unayo yonke into oonobumba ngeSpanish kuthotho loonobumba abakhulu abafanelekileyo ukuba babebala. Abanayo imifanekiso yokuhamba noonobumba, kodwa ukuza wedwa kunokuba nexabiso elikhulu kwezinye iinjongo. Ungazikhuphelela simahla. Kwaye ukuba ufuna ukususa ikhonkco, uhlala unenkqubo yokuhlela ngaphambi kokuprinta.
Isixhumanisi: Umbhalo ophezulu
Kwaye sinokufaka umbala kwaba nobumba thina unobumba geek apho kungekho zinto zokuhombisa. Oonobumba bayabonakala kwisithunzi sabo esifanayo kunye nomgca ongqindilili ukuze sikwazi ukuyinyanga kwaye sazi ukuba singazisebenzisa njani na kwimisitho, imibhiyozo okanye ukuhombisa nje indawo ethile yekhaya lethu.
Isixhumanisi: Bazali bakaGeeky
Uyilo loonobumba bombala basebenzise Ipensile yeyona nto ingabalulekanga kwaye iyonwabisa. Ngonobumba ombala osezantsi asetyenziselwa iigaraji kunye nezikolo apho sifuna ukuzisebenzisa ukuhombisa iwebhu okanye ukuba abafundi bethu benze umsebenzi olunge kakhulu wokuyila. Inika nje enye nenye uze uyibeke ngaphandle koloyiko.
Isixhumanisi: Imizobo emincinci
Oonobumba bane-stroke esingaqhelekanga, kodwa inyani yokuba zahlukile kwaye ziyintsusa ukuba sizithelekisa nabanye abaninzi. Ngendawo ebonakalayo, kulula kakhulu ukuba umbala, ke siyabacebisa kwabo banelona line lide kwaye bakufumanise kunzima ukungena kwiinkcukacha.
Isixhumanisi: oonobumba abancinci
Nangona zikwiNgesi, ukuzoba kwakhe kuyahlekisa kwaye kumnandi ukuba sizakubabeka kule migca. Kulula ukufaka umbala, nangona uneenkcukacha zabo, uthotho lweeleta ezinezilwanyana ezingenakuphuthelwa kwingqokelela yabantwana bakho.
Iileta zezilwanyana ezingakumbi
Akunakwenzeka ukuba ungabanjiswa yile nto Uthotho lweeleta zezilwanyana ukuba, nangona zikwiNgesi, uza kuzikhuphela ewe okanye ewe. Iileta zikhulu kakhulu, nangona umzobo wesilwanyana ngasinye unzima kwaye unzima.
Isixhumanisi: oonobumba bezilwanyana abangakumbi
Uvuyo lokubhala iileta
Ikhekhe lokuzalwa kumbala kunye Vuyisana nalowo umthandayo ngokuzinikela. Ukugqibelela kubantwana bethu kwaye ke wenze isipho, nokuba kuyabhalwa ukuba akukho mntu uyiqondayo. Okona kubalulekileyo kukuphazamiseka.
Unazo apha ezininzi itemplate entle yokubhala kwaye ukulungele ukufaka umbala. Banetoni yabantu abadala ngakumbi kwaye izimvo zinokuvela ngokucamngca ngomgangatho omkhulu ngamnye. Sicebisa ukuba ucofe ukuvula kwaye uzigcine.
Isixhumanisi: Oonobumba abahle
Iileta ezinomdla wokuprinta
Ukuphela sigqiba kuthotho lweeleta esizokuziprinta umgangatho ophezulu kunye nesisombululo esiphezulu.
Isixhumanisi: oonobumba besiNgesi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Ileta yemibala
Umyili odumileyo uPeter Saville uyila iindebe zeMbasa ye-Pornhub
I-capital yeValentine yeHlabathi yoyilo 2022